Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Games CD Collection 29.8.2016 ♫
1. Life is Strange Complete Season
Action, Adventure ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ လျှို့ဝှက်မှုတွေပြည့်နေတဲ့ Arcadia ကမ်းခြေက ကျောင်းသား Rachel Amber ပျောက်ဆုံးမှုကို ဖော်ထုတ်ရမယ့် နာမည်ကျော်ဂိမ်းစီးရီးဖြစ်ပြီး အချိန်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံပညာရှင်မလေး Max အဖြစ် ၀င်ရောက်ဆော့ကစားရမှာပါ။ Episodes from 1 to5အထိ စုံလင်အောင်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Warhammer 40,000: Armageddon – Da Orks
Strategy ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ Warhammer 40,000: Armageddon ရဲ့ဒုတိယမြောက် Installment ခွေပါ။ Steel Legion, the Orks, Ultramarines, Salamanders နဲ့ Blood Angels ဆိုပြီး faction (၅)ခုပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး weapons (၂၀၀)ကျော်၊ unit types (၄၀၀)ကျော်၊ Multiplayer map (၁၀)ခု ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်
3. Pokemon Go Mod (Online)
Augmented reality ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ လတ်တလောရေပန်းစားနေတဲ့ ပိုကီမွန်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းချိတ်ဆက်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိကမ္ဘာနဲ့ Virtual Life (၂)ခုကြားမှာ အာရုံမှောက်မှားစေတဲ့ ပိုကီမွန်းလေးတွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာပါ။
4. Green City: Go South
Simulation, Time Management ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုအဖြစ်ကနေ စိမ်းလန်းစိုပြည်သာယာလှပတဲ့ ကျွန်းမြို့လေးအဖြစ် တည်ဆောက်ပြုပြင်ရေးလုပ်ရမယ့် Strategy ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြ၊ စီးပွားရေး၊ စွမ်းအင်အစရှိတဲ့ အဆောက်အဦပုံစံ (၄)မျိုး၊ ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး အဆောက်အဦ (၂၂)မျိုး၊ မြေပုံ (၆)မျိုးနဲ့ Missions (၄၈)ခု ကျော်ဖြတ်ရမှာပါ။
5. Barbie Sparkling Ice Show
Sport ဂိမ်းအမျိုးအစား၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကစားရမယ့် ဘာဘီဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဘီ၊ ခရစ္စတင်း၊ ထရီဇာတို့ရဲ့ လှပကျော့ရှင်းတဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းတွေနဲ့အတူ နိုင်ငံတကာရေခဲပြင်စကိတ် ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ သွားရောက်ဆင်နွှဲရမှာပါ။